Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှု များအတွက် မေတ္တာသင်္ဂဟအဖွဲ့မှ ငွေကျပ်သိန်း ၄၀ နှင့် ကျပ်သိန်း ၂၀ တန်ဖိုးရှိ ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ လှူဒါန်း
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှု များအတွက် မေတ္တာသင်္ဂဟအဖွဲ့မှ ငွေကျပ်သိန်း ၄၀ နှင့် ကျပ်သိန်း ၂၀ တန်ဖိုးရှိ ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ လှူဒါန်း
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုများ အတွက် မေတ္တာသင်္ဂဟအဖွဲ့မှ ငွေကျပ်သိန်း ၄၀ နှင့် သိန်း ၂၀ တန်ဖိုးရှိ ထောက်ပံ့ပစ္စည်း များအား ပေးအပ်လှူဒါန်းခြင်းကို ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီ တွင် ရန်ကုန်မြို့ န၀ဒေးရှိ မရမ်းကုန်း မီးသတ်ဦးစီးဌာနတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု သတင်းရရှိသည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ တာဝန်ရှိသူများ၊ မေတ္တာသင်္ဂဟအဖွဲ့မှ အနုပညာရှင် များ၊ ဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော်များနှင့် မီဒီယာများမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
“ကျွန်တော်တို့ မေတ္တာသင်္ဂဟအဖွဲ့အနေနဲ့ အနုပညာရှင်တွေ စုပေါင်းပြီး တစ်နိုင်တစ်ပိုင် လစဉ်လှူဒါန်း ကြတယ်။ အခုကတော့ ရခိုင်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကို ကြားတဲ့အခါအရမ်းလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ တတ်နိုင်သမျှလည်းထပ်ပြီး လှူဒါန်း သွားချင်ပါသေးတယ်”ဟု မေတ္တာ သင်္ဂဟအဖွဲ့မှ သရုပ်ဆောင် ခန့်စည်သူ က ရှင်းပြခဲ့သည်။
မေတ္တာသင်္ဂဟအဖွဲ့မှ လှူဒါန်း ငွေကျပ်သိန်း ၄၀ နှင့်ကျပ်သိန်း ၂၀ တန်ဖိုးရှိ ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများကို မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးတင်မိုးက လက်ခံရယူပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါ လှူဒါန်းငွေများနှင့် ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများကို ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများ သို့ အမြန်ဆုံးပေးပို့ လှူဒါန်းသွားရန် စီစဉ်ထားသည်ဟု သိရှိရသည်။
မေတ္တာသင်္ဂဟအဖွဲ့တွင် သရုပ်ဆောင် ခန့်စည်သူ၊ မင်းမော်ကွန်း၊ စိုးရန်အောင်၊ ဟဲလေး၊ Rဇာနည်၊ ထွန်းအိန္ဒြာဗို၊ ခိုင်သင်းကြည်၊ ရတနာ၊ ခေမီကိုစသည့် အနုပညာရှင်များ နှင့် စေတနာရှင်များ ပါဝင်ထားပြီး လစဉ်လိုအပ်သည့် နေရာများသို့ သွားရောက် လှူဒါန်းနေခြင်း ဖြစ်သည်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 03:55
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှု များအတွက် မေတ္တာသင်္ဂဟအဖွဲ့မှ ငွေကျပ်သိန်း ၄၀ နှင့် ကျပ်သိန်း ၂၀ တန်ဖိုးရှိ ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ လှူဒါန်း . All Rights Reserved